Waamicha Tokkummaa Gurmuu Qabsaawoota Oromoo | Oromia Shall be Free
Waamicha Tokkummaa Gurmuu Qabsaawoota Oromoo
bilisummaa June 3, 2014	5 Comments
Haalli yeroo ammaa oromoo fioromiyaankeessajiru,yeroo kamuu caalaa diinni bitaa fimirgaan ummata oromoo irratti duuluudhaan, egeree sabaaf wabii kan ta’an, barattoota, beektota, haayyotaa fi kaa’immaan oromoo gara laafina tokko malee, ajjeessuu,hidhuu, milkisuu, biyyaa baasuu fiqabeenyaisaasaamuuttimurteef£ateejira. BittootiinEmpaayeraEtiyoophiyaadhufaa darbaa jiran, oromoo ajjeessuu, xiqqeessuu, tuffachuu,abbaabiyyummaa isaasarbuu fikkfakkaaadaatti fudhataniijim.Barabittaa sima bicuu wayyaanee kanas, bifasuukanneessaa ta’een oromoon jumlaan ajjeefamaa fibiyya abbaa isaairraa dhiibamaajira.
Faallaa kanaa ammon ilmaan oromoo yeroo kamuu caalaa bilisummaafimirga isaaniif falmachuuf,yeroo dammaqiinsiilmaan oromoo gudatee dha. Haalli kun diina keenya eddu yaaddessee jira. Abdii kutannaa kana irraa ka’uudhaan wayyaaneen ummata mirga dimokraasiifibilisummaagaafate, deebiirasaasaa kennuuf murteeffatee jirti. Gochaa fi sodaachisa diinaaf otoo hin jilbeefatiin ilmaan oromoo keessummaa dhalloonni haarawaan(New Generation) gaaffii mirgaa fiabbaa biyyummaa oromoo milkeessuuf garaa kuteenyaan rasaasa diinaa dura dhaabataan haarsaa lubbuu itti kaffalaajiran.
Gatii fi haarsaan ilmaan oromoo yeroo ammaa kaffalaa jiran diina hundeen raasuu duwwaa otoohin taane, ilmaan oromoo mara akka gootummaan diina dura waloon dhaabatan dhaamsa dabarsee jira. Gummaan ilmaan oromoo wayyaaneen wareegaman kan bahu, ilmaan oromoo amantaa, siyaasaa fi gareen otoo wal hin qoodiintokkummaanyoodhaabbanneeqofa. Yerooammaaajandaan ilmaanoromoo tokkummaa dha. Tokkummaa roga hundaa alaa fikeessatti jabeeffachuun fardii dha. Oromoonwalmalee akka £irahin qabne ifattimuldhateejira.Kanaafjechatokkumma bara baraan oromoon dhara’aa jiru, afaaniin dubbachuu duwwaa otoo hin taane, gochaan muldhisuu qabna. Waamichatokkummaa ilmaan oromoo dhiiga ittikaffalan firii argamsiisuu qabna. Ilma oromoo fi oromoof kan dhaabate, dhaaba siyaasaa, jaarmiyaa hawaasaa fi amantaalee oromoo gara garaa tokkummaan qabsaawota oromoo akka milka’u gahee isaanii bahuu qabu jenna. Haarsaa tokkummaan gaafatu kaffaluuf qophii ta’uu qabna. Kanaaf yeroon ammaa kun yeroo atattammaan tokkummaa gurmuu qabsaawotaoromoo milkeessinuudha.
Osoo haalii amma kuni hindhalatinniin dura ABOn barbaachisummaa tokkummaa gurmuu qabsawootaoromoo itti amanu’uun murtii gumiin sabaa ABO dabarseen Koree tokkummaa gurmuu qabsawoota oromoo ijaarree tokkummaan qabsaa’otaa oromoo akka milkahuu, mooraa qabsoo oromoo keessatti ilaafiilaameen akka dhugoomu mamii tokko malee hojachuuf koreen tokkummaa gurmuu qabsawoota oromoo qajeelfamaa fi karoora bafatee hojjataa turtee. Tokkummaan gurmuu qabsaawoota oromoo akka dhaaba keenyaatti dhimma toftaa otoo hintaane dhimma tarsiimoo ti. Kanaaf akka dhaabaatti haarsaa tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo milkeessan hundaa kaffaluuf qophii dha. Tokkummaan kan milka’u hunda dura ilaa fiilaameedhaan walitti dhihaatanii dubbachuu, mari’achuu, bilchinaan wal dhaggeefachuu fimaal irratti tokkoomuu akka qabnu wal hubannoo huummachuun jalqabama. Danqaa tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo fiduu malan irratti xiyyeefachuu irra, malaa fi toftaa danqaa tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoof ta’uu malan sadarkaa sadarkaan irra aanaa deemuun barbaachisaajenna. Kunitarkaanfiijalqabaa ta’uu qaba.
Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) waamicha maree fi tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo milkeessuuf dhimmoota gufuu ta’uu malan irratti xiyyeefachuu irra, dhimmoota waloon irratti waliif galuun daanda’ amu kumaatamatu jira jedhee amana. Akka dhaaba keenyaattixiyyeefannaankeenya egeree qabsoo keenyaa ti.Maree waloon goonu kana keessatti tokko mo’ataa kan biraa mo’atamaa jennee hinamannu. Kan mo’atamu gufuu tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo fidiina oromoo ti. Kan mo’atu oromoo fidhaabbileewaloon tokkummaa fiduuf dhama’ anhunda jennee ilaalla. Imaamatakana irraa kaanee maree oromoo mo’achiisuu fidiina keenya waloon mo’achuuf taasisuu qabna jennee waamicha tokkummaa gurmuu qabsaawootaoromo jaarmiyaa sisyaasaa,hawaasaa fi nama tokkumaa oromoo barbaaduu hundaaf dhiheessina.
Akka dhaaba keenyaatti dhimma waloo wajjin marl’achuu fi diina waloon qabnu waloon ofirraa kaasuuf tattaaffii godhamuu hundaa nideegaraa. Affeeraa Adda Dimokraasummaa Oromoo (ODF)irra nuuf ergameellee ijuma kanaan ilaalaa. Waan irratti woliin hojjatuu dandeenuu woliin hojjatuuf qophii ta’u keenna mirkanneeesinaa. Mariin ilaa fiilaamee dhaabbilee murta’ anduwwaan otoo hin taane, dhimmi oromoo nu ilaala qaamni jedhu hunduu waltajjii tokko jalatti mari’achuu qabna jenna. Kanaaf dhaabni keenya waltajjiin waloo dhaabbilee siyaasaa hundaaf akkauumamu gahee isaa nibaha. Kana irraa kaafnee waamicha hundaaf goona. Namii tokkee fijaarmiyaan dhimmi tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo naa ilaalajedhuu hundii waltajjii uumamuu irratti yoodhiyaatee gammachuu keenna ta’uu jabeesinnee dhaamina.
Akka dhaabaatti mareetti seenuuf hunda dura barbaachisummaa tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo irratti akka dhaabbileen siyaasaa, waldaaleen hawaasa oromoo fibeektootiin oromoo hubannoo waloo qabaannuu fidhimma tooftaa yeroo osoohintaane, akka tarsiimootti fudhannee yeroo gabaabaa keessatti akka milkeessinu waamicha goona.
Maree tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo milkeessuuf:
A. Ajandaa waloon irratti marl’annu akkawaloon wixinannu.
B. Tartiiba maree (duraa duuba) tokkummaan itti utubamuu qabu waloon wixinachuu.
Bifa tokkummaa ittiin uummannu (tumsa, adda, walitti baquu) waloon tolfachuu.
D. Toftaa fimala tokkummaan qabsa’otaa oromomoo ittimilkahuu malu waloon wixinachuu.
E. Tarsimoo mariifitokkummaa qabsaa’otawaloo wixinachuu.
F. Dhimmoota garaa garummaa babaldhisan irra, dhimmoota walitti nufiduu malan waloon wixinachuu fi kkf…waliin dubachuu qabna.
G. Waliin mari’achuuf gidduu keenya gareen sadaffaa jiraachuu hinqabu. Kallattiin waliin haasahuu danda’uu qabna.
H. Qajeelfama (codeofconduct) maree keenyaa waloon wixinachuu.
Kanabooda afuura oromummaa fiilaafiilaameetiin tarsimoo qabsoo oromoo finiinsuu danda’ an roga hundaan baafachuu dandeenya. Injifannoon hunda caalu tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo uumuu danda’uu keenya. Diinni keenya yeroo hunda kansodaatu tokkummaa keenyaa. Nuti tokkoomnaan diinni keenya ijaafigurra dhaba. Qabsoon ilmaan oromoo waggaa dheeraaf taasisan injifannoongoolabama.
Waamichi tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo kuni akka milkayuuf hawaasinni oromoo, beektoonni oromoo, dargaggoonni oromoo, shamaraan oromoo, manni amaantii oromoo ka Isilamaa, Kirstanaa fi Waaqqeefataa hundii diibbaa barbaachisuufgodhuun moraanqabsoo oromooakka tokkummaa waamicha goona. Akkasumas qaaminni tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo hawu namiin tokkoo irraa jalqabee haga gurmutti tokkummaa gurmuu qabsaawoota oromoo milkeessuuf qooda kennuu dandeetaanii hunda akkakennitaan kabajaan gaafanna.
Kanaaf, dhaabni keenya ABOn dhimmoota kana dhaabbilee siyaasaa oromoo, hawaasa oromoo, beektoota oromootiif nama dhimmi kuni na ilaala jedhu hundaa wajjin haqummaafiqulqullinaanhojachuuf qophii dha. Kaayyoon ilmaan oromoo dhiiga ittidhangalaasaniifilubbuu isaanii qaalii ittikaffallanni nu tokkoomsuu qaba jenna.
Tokkummaanhumna. General Kamaal Galchuu
Hayyuu Duree Adda BilisummaaOromoo
ABO-Dawuud Ibsaatiin hogganamu
Adda Bilisummaa Oromiyaa
Gurmuu Qabsaawootaa fiMiseensoota ABO
Hawaasaa Ormoo Minniisootaa Hawaasa Oromoo Washigton DC Hawaasa Oromoo Awustaaraliyaa Hawaasa Oromoo SouthAfriikaa
Waldaya Hawaasa Oromoo BiyyaMisiri(Egpt) Hawaasa Oromo biyya Yamaan
Waldaya Qorannaa Oromoo (OSA)
Waldaya dargagoo oromoo kaaddunyaa( lOYA) Mana Amantaa Kiristaanaa Oromoo (Minnesota)
Mana Amantaa Muslima Oromoo (Oromo churches inMinnesota) Waldaya Waaqeefanaa Oromoo (Oromo mosques inMinneosta) Oromo Citizens council ofMinnesota
Previous Dhalootni Qubee bu’aa QBO ti malee kan polotikaan gosaa dhalchee miti
Next ‪#‎oromoprotests‬, Dararamuun Ummata keenyaa haa dhaabbatu!
yoo qabsoo feetan baddii keesaniif dhiifama gaafadha. maal ximiret ijartan eesa ga`e? G7 isin gatee?
yaanni keesan bareedaa garuu Hooganoonni dhaabota oromoo ta biro tokkoomuu hin barbaadduu cadhisaatii dalagaa keesan itti fufaa.ka barbaade haa dhufu karaan keesanumatuu sirrii irra jiraa jabaadhaa.
Yaada heduu gaariidhaa ilmaan oromoo yaamichaa Kanaa dhaagesaan hundii akkaa awwataan anis akkaa Oromo tokkotii yaadaa Kanaa cinnaa naandhaabadhaa waan naraa barbaachisuu hundaa bahuufis qophidhaa
An akka yaadutti dhaabonni oromoo tokko ta’uu qaban ka jedhu hin deegaru garuu hundduu bakkuma jiranitti saba osoo qabu dhabe kana rakkoofi gadadoo jalaa baasuufi murannoon dalaguun milkkiin nu gaha jedhee Amana.haa ta’u malee yaanni General Kemal Faati yaadan kun baayyee bareedaadha.dhugaan jirttu garuu hooganaan dhaaba Oromoo kamuu kawaamicha kana jalaa awwaatu hin jiruu isinummaan jabaadhaatii dalagaa isin bira dhaabannaa jedhee dhaamssa kiyya dabarssa.
Gaabbii hin gudisin
Dhaabonni Oromoo himattu tun Oromoo sobuu barbaaddii beekaa.Hundduu wol waama ka awwaatu hin jiru.tapha akkanaa dhiisaa waan Oromoofi harkkaa qabnna jetan Murannoon hujii irra oolcha.akka sanittuu ummatuma jijjiirama himatu kanatuu Oromoofi waa fida fakkaataa dadadaaquu dhiisaatii waan Oromoo tolaa murannoon dalaguun woyyaanee buqqisaatii Oromoo bilisa baasaa pls tapha Plotikaa bira kutaa.yoo isinillee ka dadadaaxan ta’e teesanillee duubbeen qullaadhaa kana hubadhaa.yoo kana jedhu garuu General kemal akka ijannoo jabaa qabu hin hubadha jara Minisootaa jirttu takkatuu dhaaba kana dadadaassuu yaala ufii daaxanii kuftan malee jijjiiramnni waa takka hin ta’u.Namnni Hancufa gad tufe hin arraabu.namoonni tokko tokko garuu hancufa tufaa baatan waan lafa irraa arraabaa jirtan fakkaatanii rabbi isin gargaarinnaa.